(Dhegeyso) Jawaari”Mooshinkii khilaafka keenay wuu dhamaaday | Puntland
(Dhegeyso) Jawaari”Mooshinkii khilaafka keenay wuu dhamaaday
Mar 18, 2018 - Aragtiyood
Guddoomiyaha Golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) oo galabtay shir saxaafadeed ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay kaga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin Mooshinka isaga ka dhanka ah, Ciidamada la wareegay xarunta Baarlamaanka iyo arrimo kale.
Waxa uu sheegay Guddoomiye (Jawaari) inuu dhamaaday khilaafkii keenay Mooshinka, wuxuuna tilmaamay inuu jiro Mooshinka, uuna codsanayo in 10 maalmooda gudahooda lagu horgeyo Golaha Shacabka, si xeer hoosaadka loo ilaaliyo.
Sidoo kale wuxuu sheegay muranka siyaasadeed inuu cuuryaamiyay howlaha Dowladda, maadaama Xukuumadda iyo Baarlamaanka ay ku mashquuleen Mooshinka, aysanna shaqeyneyn xafiisyada Dowladda.
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay amniga dhismaha Baarlamaanka inuu gacanta ugu jiro Xukuumadda, wuxuuna ku baaqay in Ciidamadaas laga dulqaado xarunta, laguna soo celiyo Ciidamadii horey u ilaalin jiray, si howsha ay ugu soo noqoto sidii caadiga aheyd.
Guddoomiye (Jawaari) oo u muuqday mid u jawaabayay xildhibaano shalay ka dalbaday inuu is casilo ayaa sheegay inuusan ku imaan xoog oo ku yimid cod, hadana uu diyaar u yahay inuu nidaam ku baxo, isaga oo sidoo kale sheegay xildhibaanada isaga ka dalbaday inuu is casilo in ay jiraan Hurdo, loogana baahan yahay in ay ka toosaan.
Halkaan ka dhegeyso Shirka Jaraa,id ee Gudoomiyaha.